ခြေတက်နေတဲ့ အဲဗာတန်ကို အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှ မန်ယူ အသာရနိုင်ပ့ါမလား
ခြေတက်နေတဲ့ အဲဗာတန်ကို မန်ယူ အသာရနိုင်ပ့ါမလား
28 Oct 2018 . 3:46 PM
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၁၀) တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲတွေမှာတော့ အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်၊ ချယ်လ်ဆီးတို့ဟာ ပဲလေ့စ်၊ ဘန်လေနဲ့ အဝေးကွင်း ကစားရမှာဖြစ်ပြီး မန်ယူအသင်းကတော့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ အဲဗာတန်ကို လက်ခံကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ရလဒ်တွေ ပြန်ကောင်းလာတဲ့ အဲဗာတန်ကို မန်ယူ အသာရနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . . .
ပဲလေ့စ် – အာဆင်နယ် (တနင်္ဂနွေ ည ၈း၀၀ နာရီ)
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ ရလဒ်ကတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး (၇)ပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့တဲ့အပြင် ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံ(၁၁)ပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့တယ်။ နည်းပြ အမ်မရီ Unai Emery ရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေက အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ကစားသမားတွေရဲ့ နိုင်လိုစိတ် ပြင်းထန်မှုကြောင့်လည်း အခုလို နိုင်ပွဲတွေ ရနေတာလို့ပြောရမယ်။ ပဲလေ့စ်ကတော့ ဟတ်ဒါဖီးလ်ကို အနိုင်ရပြီး နောက်ဆုံး(၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့သလို အဲဒီ(၄)ပွဲမှာ (၃)ပွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ကွင်းမှာတော့ အဆိပ်ရှိလို့ အာဆင်နယ် ပေ့ါဆလို့ မရဘူး။ အာဆင်နယ် ခက်ခက်ခဲခဲကစားပြီးမှ အနိုင်ရမယ်ထင်တယ်။
ဘန်လေ – ချယ်လ်ဆီး (တနင်္ဂနွေ ည ၈း၀၀ နာရီ)
ချယ်လ်ဆီး ခြေစွမ်းမဆိုးပေမယ့် တိုက်စစ်မှာ ဂိုးရဖို့ ဟာဇက် Hazard တစ်ဦးတည်းကိုသာ အားကိုးနေရတာက ပြဿနာပါ။ ဟာဇက် ကစားအားကျသွားရင် ချယ်လ်ဆီး ဂိုးရဖို့ ခက်သွားပြီး မိုရာတာ Morata ၊ ဂျရူး Giroud တို့ကလည်း ပုံမှန်ခြေစွမ်း မရှိဘူး။ ဘန်လေကလည်း ဘုန်းမောက်၊ ကာဒစ်ဖ်တို့ကို ဆက်တိုက် နိုင်ပြီးမှ ဟတ်ဒါဖီးလ်ကို သရေ၊ မန်စီးတီးကို ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ အိမ်ကွင်း ကစားပုံ မဆိုးလို့ ချယ်လ်ဆီး ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ သရေကျဖို့များပြီး ချယ်လ်ဆီး နိုင်ရင်တောင် ဂိုးမပြတ်လောက်ဘူး။
မန်ယူ – အဲဗာတန် (တနင်္ဂနွေ ည ၁၀း၃၀ နာရီ)
မန်ယူအသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းကတော့ ခန့်မှန်းလို့ မရဘူး။ ကောင်းချင်တဲ့အချိန် ကောင်း၊ ဆိုးပြီဆိုရင်လည်း သုံးစားလို့ မရဘူး။ အသင်းကြီးတစ်သင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ခြေစွမ်းမျိုး မရှိဘဲ ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင် နိုင်လိုစိတ် ကင်းမဲ့သလိုဖြစ်နေတာက ဆိုးရွားလွန်းတယ်။ အဲဗာတန်အသင်း ရာသီအစပိုင်းမှာ ခြေစွမ်းရော၊ ရလဒ်ရော မတည်ငြိမ်ပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၃)ပွဲဆက်တိုက် အနိုင်ရခဲ့ပြီး အခု မန်ယူကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဒုက္ခပေးဦးမှာပဲ။ အိမ်ကွင်းဖြစ်ပေမယ့် မန်ယူကို သိပ်ယုံစားလို့တော့ မရဘူး။ သရေကျဖို့များပြီး မန်ယူနိုင်ရင်တောင် ဂိုးနည်းနည်းနဲ့ပဲ နိုင်သွားမယ်လို့ ထင်တယ်။
Photo:Sky Sports,Zimbio,Onefootball Español
ခွတေကျနတေဲ့ အဲဗာတနျကို မနျယူ အသာရနိုငျပ့ါမလား
ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ(၁၀) တနင်ျဂနှနေပှေဲ့တှမှောတော့ အသငျးကွီးတှဖွေဈတဲ့ အာဆငျနယျ၊ ခယျြလျဆီးတို့ဟာ ပဲလစျေ့၊ ဘနျလနေဲ့ အဝေးကှငျး ကစားရမှာဖွဈပွီး မနျယူအသငျးကတော့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ အဲဗာတနျကို လကျခံကစားရမှာဖွဈပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျး ရလဒျတှေ ပွနျကောငျးလာတဲ့ အဲဗာတနျကို မနျယူ အသာရနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ . . .
ပဲလစျေ့ – အာဆငျနယျ (တနင်ျဂနှေ ည ၈း၀၀ နာရီ)
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးနဲ့ ရလဒျကတော့ မယုံနိုငျလောကျအောငျပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂျ နောကျဆုံး (၇)ပှဲဆကျ အနိုငျရခဲ့တဲ့အပွငျ ပွိုငျပှဲစုံ နောကျဆုံ(၁၁)ပှဲဆကျ အနိုငျရခဲ့တယျ။ နညျးပွ အမျမရီ Unai Emery ရဲ့ နညျးဗြူဟာတှကေ အလုပျဖွဈနတေဲ့အပွငျ ကစားသမားတှရေဲ့ နိုငျလိုစိတျ ပွငျးထနျမှုကွောငျ့လညျး အခုလို နိုငျပှဲတှေ ရနတောလို့ပွောရမယျ။ ပဲလစျေ့ကတော့ ဟတျဒါဖီးလျကို အနိုငျရပွီး နောကျဆုံး(၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့သလို အဲဒီ(၄)ပှဲမှာ (၃)ပှဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အိမျကှငျးမှာတော့ အဆိပျရှိလို့ အာဆငျနယျ ပေ့ါဆလို့ မရဘူး။ အာဆငျနယျ ခကျခကျခဲခဲကစားပွီးမှ အနိုငျရမယျထငျတယျ။
ဘနျလေ – ခယျြလျဆီး (တနင်ျဂနှေ ည ၈း၀၀ နာရီ)
ခယျြလျဆီး ခွစှေမျးမဆိုးပမေယျ့ တိုကျစဈမှာ ဂိုးရဖို့ ဟာဇကျ Hazard တဈဦးတညျးကိုသာ အားကိုးနရေတာက ပွဿနာပါ။ ဟာဇကျ ကစားအားကသြှားရငျ ခယျြလျဆီး ဂိုးရဖို့ ခကျသှားပွီး မိုရာတာ Morata ၊ ဂရြူး Giroud တို့ကလညျး ပုံမှနျခွစှေမျး မရှိဘူး။ ဘနျလကေလညျး ဘုနျးမောကျ၊ ကာဒဈဖျတို့ကို ဆကျတိုကျ နိုငျပွီးမှ ဟတျဒါဖီးလျကို သရေ၊ မနျစီးတီးကို ဂိုးပွတျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ အိမျကှငျး ကစားပုံ မဆိုးလို့ ခယျြလျဆီး ဒုက်ခရောကျနိုငျတယျ။ သရကေဖြို့မြားပွီး ခယျြလျဆီး နိုငျရငျတောငျ ဂိုးမပွတျလောကျဘူး။
မနျယူ – အဲဗာတနျ (တနင်ျဂနှေ ည ၁၀း၃၀ နာရီ)
မနျယူအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးကတော့ ခနျ့မှနျးလို့ မရဘူး။ ကောငျးခငျြတဲ့အခြိနျ ကောငျး၊ ဆိုးပွီဆိုရငျလညျး သုံးစားလို့ မရဘူး။ အသငျးကွီးတဈသငျးရဲ့ စိတျဓာတျ၊ ခွစှေမျးမြိုး မရှိဘဲ ကစားသမားတှကေိုယျတိုငျ နိုငျလိုစိတျ ကငျးမဲ့သလိုဖွဈနတောက ဆိုးရှားလှနျးတယျ။ အဲဗာတနျအသငျး ရာသီအစပိုငျးမှာ ခွစှေမျးရော၊ ရလဒျရော မတညျငွိမျပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၃)ပှဲဆကျတိုကျ အနိုငျရခဲ့ပွီး အခု မနျယူကိုလညျး အတတျနိုငျဆုံး ဒုက်ခပေးဦးမှာပဲ။ အိမျကှငျးဖွဈပမေယျ့ မနျယူကို သိပျယုံစားလို့တော့ မရဘူး။ သရကေဖြို့မြားပွီး မနျယူနိုငျရငျတောငျ ဂိုးနညျးနညျးနဲ့ပဲ နိုငျသှားမယျလို့ ထငျတယျ။